Atletisma - Afrika faritra fahadimy :: Nijanona teo amin'ny laharana fahefatra Ilahivokatse • AoRaha
Atletisma – Afrika faritra fahadimy Nijanona teo amin’ny laharana fahefatra Ilahivokatse
Mbola tsy nisy tafakatra lampihazo aloha ireo atelta efa-dahy niaro ny voninahi-pirenena tamin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, eo amin’ny taranja atletisma, aty amin’ny Faritra fahadimy, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, tatsy amin’ny nosy Maorisy. Niatrika ny fihaonana tany i Soazara Lahivokatse Randrianantenaina (800m), Randrianantenaina Frederic Daurard (100m sy 200m), Rabearison Todisoa Franck (400m) ary Randrianarivo Joany Tiavina (100m sy 200m).
Soazara Ilahivokatse no tsara vokatra indrindra tamin’ izy ireo, rehefa nahavita fe-potoana 1’52″89 tamin’ny halaviran-dalana 800m ka nitazona ny laharana fahefatra. Nantenaina kosa laharana fahadimy (21″80) tamin’ny sokajy 200m . Fahenina izy tamin’ny halaviran-dalana 100m (10″68).Nijanona ho fahadimy ihany koa i Todisoa Franck tamin’ny halaviran-dalana 400m (48″11).
Dingana goavana no vitan’ny delegasiona malagasy, tany Maorisy. Zava-dehibe ny efa nandraisana anjara tamin’ny lalao famaranan’izany hetsika afrikanina izany. « Matetika raraka any amin’ny dingana fifanintsa­nana ny atleta malagasy. Tamin’ity kosa dia efa tafakatra lalao famaranana izy ireo », hoy ny fanazavan-dRakoto­malala Tsiry Manantena, tale teknika nasionalin’ny Federasiona malagasin’ny atletisma.
Baolina kitra – CAN 2019 :: Tafita amin’ny 1/4-dalana ny BAREA rehefa nandavo ny RD Congo
Hazakazaka ivelan’ny kianja :: Nanjakazakan’ireo tanora ny « Rodorodon’Alaotra”